Dhageyso: Dab xalay ka kacay suuqa Madiino ee Degmada Wadajir oo qasaaro kala duwan geystay – Walaal24 Newss
January 25, 2019	1	By walaal24
Dab xalay ka kacay suuqa Madiino ee Degmada Wadajir oo qasaaro kala duwan geystay waxaana dabkaasi uu bur buriyey qaybo kamid ah suuqa gaar ahaan halka lagu magacaabo Qandalada, waxaa lagu guuleystay in la damiyo dab kaas xalay waqti danbe.
Markuu dabku kacay waxaa si deg deg ah u gaaray goobtaasi kooxaha gurmadka deg dega ah, kuwaas oo xalay saq dhexe ku guulaystay in ay damiyaan dabka.
Si rasmi looma xaqiijin karo waxyaabaha sababay dabka iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay, waxaana maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen in ay tirakoob ay ku samayn doonaan khasaaraha dabkaasi.
Taliyaha Saldhig Galbeed ee ciidanka Booliska Soomaaliyeed Maxamed Daahir ayaa warbaahinta u sheegay in baaritaano lagu samayn doono waxyaabaha soo cel celiyey gubashadda suuqyadda Muqdisho islamarkaana la xisaabtami doonaan shirkaddaha Korontada bixiya ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha degmada Wadajir Cumar C/llaahi Xasan ayaa sheegay in ugu dambeyn lagu guuleystay deminta dabkaas,isla markaana ay gurmad weyn u soo sameeyeen Gawaarida Gurmadka Shirkadda Hormuud,Mamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Deeyniile.
Gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay in uu si aad ah ugu mahadcelinaayo kooxaha gurmadka deg dega ah oo ugu horeyso shirkadda oo Hormuud oo dadaal badan ku bixiyey in dabka uusan gaarin goobo kale oo kamid ah suuqaasi.
Halkan hoose ka dhageyso cododka Mas’uuliyiinta:-
Diyaaradaha Mareykanka oo weerar duqeyn ku dilay Sargaal ka tirsan Ururka Al-shabaab
Madaxweynaha Jubaland oo lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland
Madaxweyne Farmaajo oo booqday Isbitaalka Madiina dadkii ku dhaawacmay Qaraxii wadada Maka Al mukarama
R/wasaare kuxigeenka Dalka oo ka qeyb galay Munaasabad uu xilka kula wareegay Wasiirka cusub ee Waxbarashada
Howl-gal Ciidanka Xoogga Dalka oo horjooge sare Alshabaab ku dileen Gobolka Shabeelah Hoose
Ciidamada Danab oo kooxda Al shabaab kala wareegay Tuulooyin hoostaga Degmada Balcad
Qaramada Midoobay oo soo saartay in la dhimo Ciidmada AMISOM ee Soomaaliya
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo munaasibada 26-ka June ka jeediyey khudbad garnaqsi ah, beesha caalamkana u diray farrin cad….